Matongerwo eNyika, 27 Mbudzi 2017
Muvhuro 27 Mbudzi 2017
VaChiyangwa Vanoti Havana Kubvira Vambosungwa
Mutungamiri weZimbabwe Football Association, VaPhillip Chiyangwa, varamba mashoko ari kufamba ekuti vakasungwa vachida kubuda munyika nemari.
MDC-T Inoti Kwete kuRobert Mugabe Youth Day
Bato rinopikisa reMDC-T rinoti harisi kuzocherechedza zuva rekuberekwa kwevaive mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe, iro rakatarwa nehurumende kuti rive zororo kutanga gore rinouya.
Nyanzvi Dzinoti Hapana Mutsauko Pakati paVaMugabe naVaMnangagwa
Dzimwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti hadzioni mutsauko uripo pakati pemutungamiri mutsva wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, naVaRobert Mugabe avo vakatonga nyika kwemakore makumi matatu nemanomwe.
Hama dzaVaMugabe Dzinoti Hadziwirirane naAmai Grace Mugabe
Hama dzaVaMugabe dzinosanganisira mhuri yekwaMugabe, kwaJenami pamwe neyekwaMatibiri, dzinoti Amai Grace Mugabe munhu asingatsiurike sezvo vaine pamuromo pasingamharwi nenhunzi.
ZADHR Yoshushikana neMabatirwo aVaChombo neVamwe veZanu PF Vari muHusungwa
Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu, re Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, rinoti riri kushushikana zvikuru nemabatirwo ari kuitwa vamwe vevaimbove vakuru-vakuru mubato re Zanu-PF, avo vakasungwa svondo rapera.
Vakawanda Vove neVimbo Kuti Hurumende Itsva Ichagadzirisa Zvinhu
Vanhu vakawanda vanoti vane tarisiro yekuti zvinhu zvichanaka nekukurumidza munyika zvichitevera kugadzwa kwakaitwa VaEmmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika mutsva.
Kudzokera kweMauto kuMakamba Kwosuvisa Vamwe
Apo mauto eZimbabwe Defence Forces ave kudzokera kumabharaki awo zvichitevera chirongwa che “Operation Restore Legacy” icho chakabvisa vaimbove mutungamiriri wenyika, VaRobert Mugabe pachigaro, veruzhinji muHarare vanoti masoja akaita basa rawo nemazvo.